Search မြန်မာချောင်းရိုက် - BajarFB.com
Search Results - မြန်မာချောင်းရိုက်
Live မှာ လူပေါ်ပြုတ်ကျတာ မဟုတ်ပါဘူး ဘေး ကို ကျသွားတာပါ.နောက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်တုန်းကလည်း အောက်စ မလွှတ်ပါဘူး. အတင်း အနီးကပ်ကြည့်ကြလို့ပါဆိုတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ ဖြေရှင်းချက် Zawgyi ျဖင့္ဖတ္ရန္ Live မွာ လူေပၚျပဳတ္က်တာ မဟုတ္ပါဘူး ေဘး ကို က်သြားတာပါ.ေနာက္ၿပီး ဓါတ္ပုံ႐ိုက္တုန္းကလည္း ေအာက္စ မလႊတ္ပါဘူး. အတင္း အနီးကပ္ၾကည့္ၾကလို႔ပါဆိုတဲ့ မမေဆာင္းရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ Hall of Fame by Eleven 11 Jan · 312K views
https://www.facebook.com/ငွေစန္ဒာ-ပုဇွန်ခြောက်-104355857972047/ Soe Pyae Thazin 103K views · Was live
Buffalo '66 Photobooth Scene
Vincent Gallo and Christina Ricci star inafilmic portrait of Stockholm syndrome: http://bit.ly/2xjWIQU NOWNESS 22 Mar · 701K views
ဥက္ကာမင်းမောင်.. ချစ်သူ နဲ့ ဘာကြောင့် လမ်းခွဲလိုက်လဲ?
“ခွေး မကျောင်းတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ရန်စဖြစ်ခဲ့ပြီး ချစ်သူ နဲ့ ပြတ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒီကိစ္စ အတွက်လေးနဲ့ ပြတ်တယ် ဆိုတော့ လူတွေက ကလေးဆန်တယ် ပြောကြတယ်။ တကယ်တော့ ရန်ဖြစ်တိုင်း သူက အတိတ်က ကိစ္စတွေကို ပြန်ဖော်တယ်။ အိမ်ပေါ်က နှင်ချတယ်။ ရအောင် ညှိပေမယ့် သူက ပြတ်ချင်တယ် ဆိုတော့ ပြတ်လိုက်ကြတာပါ။ ကိုယ့်ကို မလိုချင်တဲ့ လူကို တောင်းပန်ပြီး မတွဲချင်တော့ဘူး” လို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဥက္ကာမင်းမောင် နှင့် ခဏတာ။ Myanmar Celebrity TV Update: Okkar Min Maung says Why he broke up with his boyfriend? #MyanmarActor #OkkarMinMaung #MyanmarCelebrityRelationship #ဥက္ကာမင်းမောင် Myanmar Celebrity TV 27 Dec 2020 · 732K views
အာရွရဲ႕ ပထမဆံုး ရန္ကုန္က Pride Boat Parade
"လိင္တူခ်စ္သူေတြ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေနလာႏိုင္ရင္ ခိုးေၾကာင္ခိုးဝွက္ မဟုတ္တဲ့ အတြက္ အမွားက်ဴးလြန္မႈဆိုတာ အရမ္းနည္းလာမယ္ ..." #ဘီဘီစီျမန္မာပိုင္း BBC Burmese 26 Jan 2019 · 3.3M views